Semalt: Ziziphi iilwimi eziphambili zoLungiselelo lokuHlola iSayithi?
I-Web scraping, eyaziwa nangokuthi ukukhutshwa kwedatha nokuvunwa kwewebhu, yindlela yokucima idatha evela kwiindawo ezahlukeneyo. I-software yokuqhafaza i-intanethi ukufikelela kwi-intanethi okanye kwi-browser yewebhu okanye nge-Transfer Protocol Transfer Protocol. Ukuqhwala kwiWebhu kuvame ukuphunyezwa ngokuncedisa i-automated bots okanye i-web crawlers. Bahamba ngamaphepha ahlukeneyo ewebhu, baqokele idatha baze bayikhuphe njengemfuno zabasebenzisi. Umxholo wephepha lewebhu ukhutshwe, utshintshwe kwaye uphando, ngelixa idatha ikopishwe kwiipredishithi ngokucwangciswa ngokupheleleyo ngokuhambelana nemiyalelo.
Ikhasi lewebhu lakhiwa ngeelwimi ezisetyenziswe ngokubhaliweyo ezifana ne-HTML, Python, ne-XHTML. Iqule ubuncwane bolwazi kwaye yenzelwe abantu, kungekhona i-web scraping bots. Nangona kunjalo, izixhobo ezahlukeneyo zokuhlamba ziyakwazi ukufunda ezi zifana nabantu kwaye zifumane ulwazi olufanelekileyo kwiifom ze-CSV okanye ze-JSON.
Ngaba i-Python iyona nto ilungileyo yolwimi yokutshiza?
I-Python ngokuyinqobo ulwimi lwenkqubo olunikeza "igobolondo" ukuba ichane idatha ngendlela yoxwebhu olucacileyo. Inceda abasebenzisi ukuba bakhiphe ulwazi kwiimpawu ezahlukeneyo zewebhu. I-Python iyakunceda xa abathengisi be-digital okanye abaprogram banquma ukukhangela idatha ngesandla. Ngalolu lwimi, sinokungena kalula umgca wekhowudi kwaye sibone indlela idatha ngayo. Nangona kunjalo, i-Python ayilona ulwimi elona lililo lihle kakhulu.
I-Python inamakhulu amanyathelo encedo ayenzelwe ukugcina ixesha lethu. Ngokomzekelo, lidumileyo phakathi kweengcali zophando kunye nolwazi. I-Python yenza kube lula ngathi ukukhangela idatha efanelekileyo kunye namaphepha e-intanethi kwi-intanethi. Kodwa xa kuziwa kwi-web scraping, i-Python ayisebenzisi njengeC ++ kunye ne-PHP. I-Python iyaziwa ngokuxhasa kwayo eyakhelwe ngaphakathi kwaye igcina idatha kwiifom eziqhelekileyo ezifana ne-JSON ne-CSV.
Iilwimi eziphambili zokusetyenziswa kwewebhu:
Ngoku kuyacaca ukuba iPython ayiyona ilwimi elungileyo kwi-web scraping. Kunoko, abaninzi beprogram kunye neenkcukacha zesayensi bazikhethela iC ++, i-Node. js, kunye ne-PHP phezu kwePython.
Kukulungele ukutshitshisa nokukhwela iziza ezahlukeneyo. INode. js ifanelekile kwiiwebhsayithi ezinamandla kunye neenkxaso ezisasazwayo kwi-intanethi. Olu lwimi luncedo ekutshekeni idatha kokubili kwiiwebhusayithi eziphambili neziphambili.
I-C ++ inika ukusebenza okukhulu kwaye ixabiso elifanelekileyo. Olu lwimi lungcono kakhulu kunePython kwaye luqinisekisa iziphumo eziphezulu. Nangona kunjalo, akukhuthazwa ukuba amashishini ngenxa yamakhowudi anzima.
i-PHP yilwimi efanelekileyo kwi-web scraping. Ngokungafani nePython neC ++, i-PHP ayilenzi iingxaki ngexesha ihlela imisebenzi kunye nokukhangela umxholo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo.Kufana nomgca wonke kwaye uphatha amaninzi kwi-web-crawling kunye neeprojekti zokukhutshwa kwedatha kwi-intanethi. Ngenisa. Io kunye neKimono Labs zizinto ezimbini ezinamandla zokucoca idatha ngokusekelwe kwi-PHP. Zinezinto ezintle kwaye ziyakwazi ukukhawula inani elikhulu lamakhasi ewebhu ngeyure okanye ezimbini. Ngelishwa, i-Soup Beautiful kunye neCrothon (esekelwe kwi-Python) ayinikezeli naliphi na inkxaso njengoko izixhobo zedatha yokukhutshwa kwedatha esekelwe kwi-PHP.
Ngoku kuyacaca ukuba zonke iilwimi zeprogram zineenzuzo kunye nezibi. I-PHP, nangona kunjalo, i bhetele ngakumbi kunePython kwaye iyona nto ilungileyo yolwimi lwe-scraping language. Inikeza izibonelelo ezingcono kubasebenzisi kwaye zingakwazi ukuphatha iiprojekthi ezinkulu ngokukhawuleza Source .